China Quality inspection amin'ny Krismasy isan-taona.Mpanamboatra sy mpamatsy |Sincoheren
Tamin'ny herinandro voalohan'ny volana Desambra, mba hiarahabana ny fahatongavan'ny Krismasy, ny orinasa Sincoheren Beijing dia nanomboka ny fanavaozana ny vokatra sy ny fanaraha-maso ny kalitao indray mandeha isan-taona.Misy teknisianina mahay maherin'ny 50 amin'izao fotoana izao ao amin'ny orinasa Beijing, ary ny mpiasa tsirairay dia manaraka ny vokatra vokarin'ny tenany indray mandinika, mitsapa ary mandamina ny fitaovana vokatra.
Ny kalitao dia ny fanahin'ny fitaovana hatsaran-tarehy foana, noho izany dia mifandray amin'ny kalitaon'ny milina farany ny fanaraha-maso ny fitaovana rehetra sy ny fitsapana henjana amin'ny dingana famokarana rehetra.Ny milina rehetra dia handalo fanaraha-maso hentitra tsara alohan'ny fandefasana.Mba hahazoana antoka fa tsy misy olana, dia halefa any amin'ny mpanjifanay.
Ny orinasa dia manana rafitra fitantanana kalitao henjana, satria ny vokatra dia fitaovana tsara tarehy tsara tarehy.Ho an'ny laser sy ny fitaovana hafa, ny mpiasa dia tsy maintsy manao akanjo henjana sy solomaso laser.Ho an'ny fivoriamben'ny fitaovana tsirairay sy ny visy tsirairay, dia hisy ny fisafoana manokana ataon'ny mpiasa mba hahazoana antoka fa tsy mety mandeha ny dingana rehetra.
Ny talen'ny orinasa dia hanao fanisana ny vokatra rehetra, izay vokatra be indrindra amin'ny varotra, izay vokatra manana taham-pahafatesana ambony indrindra, izay kojakoja ilaina hatsaraina, sns., Mba hahafahan'ny vokatra azonay tsara kokoa amin'ny tsena.
Manana tsipika feno vokatra ny orinasa ankehitriny, ary mandeha amin'ny hafainganam-pandeha avo isan'andro ny andalana tsirairay.Ankehitriny ny vokatray dia ahitana laser diode, SHR IPL, Q Switched Nd yag laser, CO2 laser, Cavitation RF, Kumashape, Coolplas Cryolipolysis, Hydrafacial, Emsculpt, HIFU, Oxygen, Pressotherapy, Plasma pen, sns. IPL, CO2 laser ary Q Switched Nd yag laser ankatoavin'ny FDA sy TUV Medical CE, ny vokatra hafa dia manana CE avokoa.
Ny kalitao no voalohany.Avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ny mpanjifanay.Manantena izahay fa ny vokatra vokarinay dia azo aterina amin'ny mpanjifa tsirairay.Manantena ihany koa izahay fa ny vokatray dia afaka mitondra orinasa tsara ho an'ny mpanjifanay.